Amaqhinga okuHlala kweNdawo eNcinci -Ungayongeza njani indawo yokuhlala kumakhaya amancinci - Uyilo Lokuphefumlela
Amaqhinga okuHlala kweNdawo eNcinci -Ungayongeza njani indawo yokuhlala kumakhaya amancinci
Kungenxa yokuba ikhaya lakho alikho likhulu, oko akuthethi ukuba awukwazi ukubamba itheko elikhulu. Ezi zimvo zobukrelekrele zikhokelela ekuhlaleni ngakumbi okubonakala phantse ngaphandle komoya omncinci (igama eliphambili lokuba phantse ).
Jonga igalari Shumi elinantlanuIifoto Unyango lweZindlu 1I-15Yongeza i-Poufs ezimbalwa
Ezi zitulo zithambileyo ziingxowa zeembotyi ezintsonkothileyo. Kwaye ekubeni ziguquguqukayo, ungazikhupha ngaphandle kwamehlo nakwikhabethe xa zingasetyenziswa.
ukuwa kweveranda yokuhombisa imibono yemifanekiso
Bona ngakumbi kwiNyango yeNdlu
Lillie othandekayo MbiniI-15Zama iBench Booth
Eyona nto intle malunga neebhentshi kuxa ubamba usuku lokudlala, indlela abantwana abaninzi abanokulingana ngayo etafileni kunezitulo eziqhelekileyo. Kwaye le inikezela ngebhonasi yokugcina ngaphantsi.
Bona ngakumbi kuLillie othandekayo
Umfundi oJongayo 3I-15Fihla ilindle
Izitulo zokulalisa isisombululo esicocekileyo sokongeza izitulo zebhonasi kwigumbi lakho lokuhlala esele ligcwele. Khuphela ngaphandle xa undwendwe kwaye ubatyhalele kude xa ungenalo.
Bona ngakumbi kuMfundi oMjongayo
UKelly Stuart 4I-15Khupha itafile yakho
Ukunikezela indawo yomgangatho efunekayo kwitafile kukuzinikela okukhulu kwindawo encinci, yiyo loo nto lo mninikhaya ekhethe itafile ebushelelezi esongelwa kuphela ngexesha lokutya, idityaniswe nezitulo ezisongelayo.
Indlu kaNalle 5I-15Izitulo ezongezelelweyo
Ezi zitulo zinokusetyenziswa njengetafile esecaleni emini okanye izihlalo ezithathu ezahlukileyo ngobusuku obuzele iyure. Le blogger yapeyinta isihlalo ngasinye umthunzi owahlukileyo weminti ukwenza isiphumo se-ombre xa ingasetyenziswa.
Bona ngakumbi kwiNdlu kaNalle
USibylle Roessler 6I-15Sebenzisa iWall Space yakho
Kungenxa yokuba awunalo ugcino lwangaphantsi lwezihlalo ezisongwayo, oko akuthethi ukuba akufuneki utyale imali ezimbalwa. Ezi nguqulelo zomthi zixhonywe eludongeni kwaye zide zongeze i-rustic touch kwigumbi elincinci.
Ubomi bam obungenanjongo 7I-15Musa ukuthiya kwizitulo ezisongekileyo
Xa unika izitulo zentsimbi uhlaziyo oluthandekayo olufana nale blogger (hello, trim pink kunye namachaphaza egolide), ziyinyani kakhulu. Kulungile: Kulula ukukhupha phantsi kwebhedi yakho xa iindwendwe ziza ngokungalindelekanga.
Bona ngakumbi kuBomi bam obungenanto
Ukukhathazeka 8I-15Sebenzisa Zonke iikona zakho
Xa unesithuba esilinganiselweyo ekhayeni lakho, yenza okuninzi kuko konke-nokuba ziikona ezingathandekiyo. Esi sihlalo sijingayo siguqula indawo engasetyenziswanga ibe yindawo yokufunda.
Bona ngakumbi kwiPassion Shake
Stoffer Ukufota 9I-15Yongeza izihlalo zeWindows
Sukuvumela loo ndawo iphantsi kwodonga oluzaliswe ziifestile ukuba ziye kungcola: Le bhlogger ikrelekrele yatyhala ibhentshi elizele yimicamelo enoboya ecaleni kwayo ukuyisa kwinqanaba elilandelayo.
Bona ngakumbi kwiThe Everygirl
Uyilo lwesiponji 10I-15Yenza iStools isebenze nzima
Isitulo esifanayo osisebenzisayo ukufikelela kugcino oluphezulu ekhitshini lakho sinokusetyenziswa njengesihlalo. Ke, kuba zimfutshane, ungayifaka phantsi kwetafile kwaye uphume kwindlela yokuhamba xa iphelile ipati.
Bona ngakumbi kwi- Design Sponge
I-Shanty 2 Chic Shumi elinanyeI-15Fihla kwitafile yakho
Xa le tafile isongelwe phezulu, ijongeka ngathi yikhabhathi enebhodi ebhodini yokubhala amanqaku. Kodwa yiza ixesha leyure elonwabileyo, ungalisonga ukuze ufumane indawo yokuhlangana kunye nabahlobo.
Bona ngakumbi kwiShanty 2 Chic
Yondla kunye noNestle 12I-15Gcina iiBhentshi kufuphi
Qikelela: Indawo yokuhlala eyongezelelweyo yeqela lakho akufuneki ivele kwigumbi elinye obambe lona. Tsala ibhentshi uphume kwigumbi lakho lokulala xa kufika iindwendwe.
izindlu zenja ziyathengiswa
Bona ngakumbi kuNourish naseNestle
Ukuziphatha kunye nokuphefumlelwa 13I-15Ungalibali iiWindows
Kungenxa yokuba le pane yeglasi ithatha isiqingatha sodonga lwakho, oko akuthethi ukuba kuphelile. Apha, ishelufu liguqulwa libe yibhari yekofu emini kunye nesikhululo sesibheno ebusuku.
Bona ngakumbi kwi-Offbeat kunye ne-Inspired
Intliziyo iququzelela 14I-15Khangela kwi-Closet yakho
Indawo yokugcina yomntu omnye yiofisi yomnye umntu, ibha okanye indawo yokuhlala eyongezelelweyo. Ukuba unayo ikhabethe kwigumbi lakho elincinci kakhulu, ungoyiki ukucinga ngaphandle kwebhokisi.
Bona ngakumbi kwi- Intliziyo yokuCwangcisa
Uyilo lwesiponji Shumi elinantlanuI-15Vavanya amanye amavili
Isitshixo kwiindawo ezincinci kukutyala imali kwifenitshala esebenza ngeendlela ezininzi. Le nqwelo yokuqengqeleka inikezela ngendawo yokulwa xa kutyiwa ngabantu, kodwa inokutyhalwa eludongeni xa inguwe nje.
OkulandelayoKroba ngaphakathi kwale Ndlu yeNdawo entle yeTrailer Trailer Isibhengezo-Qhubeka nokuFunda apha ngezantsiULauren Smith McDonough Umhleli oMkhulu ULauren ungumhleli ophezulu kwi-Hearst.Lo mxholo wenziwe kwaye ugcinwe ngumntu wesithathu, kwaye ungeniswe kweli phepha ukunceda abasebenzisi ukubonelela ngeedilesi zabo ze-imeyile. Unokwazi ukufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kunye nomxholo ofanayo kwipiyano.io
imigangatho yesamente endlwini
iseti yetafile yasekhitshini
indlela yokukhulisa i-asters
uyilo lwasekhaya 3d yasimahla